डेभिडब्रिडबर्ग अगस्ट 23, 2020 जनवरी 27, 2021
कसरी अमेरिका प्रेरणादायक कला को अमेरिका कलाकारहरु मनोरन्जन: तत्काल क्लासिक्स
अमेरिकाको फाइन आर्ट एक ठूलो विषय हो। मेरो लक्ष्य तपाइँलाई केहि वर्तमान कलाकारहरू ल्याउन हो। विषय भारी हुन आवश्यक छैन। छविहरू आफ्नै लागि बोल्न सक्दछन्।
तपाईलाई सम्भवतः स्नातक कलेजको लागि कागज लेख्ने सम्झना छ। मेरो केहि स्थानीय कलाकारहरूमा थियो। मैले व्यक्तिलाई खोज्न र विश्लेषण गर्नका लागि क्षेत्रमा जानुपर्‍यो र मलाई काम रोचक लाग्यो।
वर्षौंपछि ती कलाकारहरू मध्ये एक, पीटर वेट, कनेक्टिकटको एक अग्रणी कलाकार मानिनेछ। जहाँ म बस्छु। १ greatly 1990 ० पछि उनले मलाई धेरै उत्साहित गरे।
अमेरिकामा फाइन आर्ट न्यूयोर्कमा सुरु हुन्छ
“यो प्रदर्शनी COVID-2020 महामारीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियामा २०२० को वसन्त conतुमा कल्पना गरिएको थियो। जब यो विकसित भयो, प्रणालीगत नस्लवादको समानान्तर महामारी तीव्र र दर्दनाक फोकसमा आयो। दुबै संकटले प्रदर्शनीको पृष्ठभूमि सेट गर्यो। ”
- सार्वजनिक कला कोष संगठनले "adding०० JCDecaux बस आश्रयहरु र १ five०० भन्दा बढी LinkNYC कियोस्कहरु मा सबै पाँच बरोहरु मा छविहरु जोडीरहेको छ।"
एमिली माई स्मिथको कामको नमूना, मलाई टाढा उडायो। म तपाईंसँग छवि साझा गर्न चाहन्छु।
एमिली माई स्मिथ, फूलहरूको बदला (२०२०)। कलाकार र सिमोन सुबल ग्यालरी, पेरोटीन ग्यालरी, ग्यालरी रोडोल्फे जानसेन, र समकालीन ललित कला बर्लिनको सौजन्य।
सुश्री स्मिथले पप संस्कृतिको स्वतन्त्रतालाई धेरै गम्भीर फाइन आर्ट वर्ल्डमा लग्दछ। उनको विषयको चश्माको प्रतिबिम्बले मलाई सोच्दछ कि यदि मैले उसको टाउको पछाडि क्षितिज हेरिरहेको छु भने। प्रकाश र छायाँ आकार र र withको साथ खेल खेल्छन्। किनारमा बाहिर प्रयोग बारे कुरा गर्नुहोस्।
अर्को कोविड १ during को बखत, विशेष गरी न्यूयोर्कमा संक्रमणको उचाई, तपाईं कलाकृति कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ? Artnet.com मार्च मा त्यो मात्र जवाफ मा काम गरे। बन्द गर्दा तपाईंको र मेरो लागि शून्य रह्यो।
मूर्तिकला मैले फेला पारेको जीन-मैरी अप्रीउ हो। उनीसँग आउटडोर स्थानहरू छन् (अन्य स्थानहरूमा उनको काम बस्ने ठाउँहरू)। विषय तपाइँको मनपर्ने हुन सक्छ, घोडा।
जीन-मैरीको उनको विषयको उपचार विचित्र छ। त्यो बधाई हो स्केल सुपर मानव हो। यदि तपाईंले घोडाहरूको साथ काम गर्नुभयो भने, स्केलले तपाईंलाई घरैमा महसुस गराउन सक्छ।
जीन-मैरी अप्रीयू, हार्स, २०१ 2019। कलाकारको सौजन्य र क्लियरिING, न्यूयोर्क / ब्रसेल्स; ग्यालरी ईवा प्रेसेनहुबेर, ज्यरिक / न्यूयोर्क। सार्वजनिक कला कोष, न्यू योर्कको फोटो सौजन्य।
ठीक छ, तपाईंलाई दुई प्रमुख कलाकारहरूसँग परिचय दिइसके पछि, म तपाईंलाई मेरो कलाको नमूनाको साथ छोड्न चाहन्छु। निलो टाइलिंग छवि सार्वजनिक डोमेनमा जर्मन सडक ग्राफिटी थियो। तीनवटा टाइल गरिएका शीर्ष छविहरू युद्धको अग्रसरताको बारेमा "डेभिड अफ वार", डेभिड ब्रिडबर्ग, २०१ 2015 को हो।
अवश्य पनि मेरो छविले यसको आफ्नै जीवन लिन्छ। तपाईले परिणामलाई भित्तिचित्रको रूपमा देख्नुहुने छैन। तपाईं यो कलाकृति फेला पार्न सक्नुहुन्छ “भर्खर १ 18"।
तपाईंले सायद आफूलाई यी कार्यहरू द्वारा हल्का मनोरन्जन पाउनुभयो। प्लस तपाईं गहिरा जान सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं विचारमा गहिरो जाने छनौट गर्नुहुन्छ भने। हालको कला दृश्यले सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रलाई अँगालेको छ।
प्रश्न: कुन कलाकारको काम तपाईंलाई मन पर्छ? के म "प्रेम" शब्द प्रयोग गर्न सक्छु? यी तीनहरू तपाईंको रडारमा हुनु आवश्यक छ।
परिणाम! क्यानभास वाल आर्ट सजावट कसरी हेर्ने